ဆောင်းပါးကဏ္ဍ Archives - SANTHITSA
မွို့ရိုးမွို့တံခါး၌ လူစတေးခွငျးအလေ့ မွို့ရိုး၊ မွို့တံခါးမြားတှငျ ဖုတျပွိတ်တာအစိမျးသအေဖွဈ အစောငျ့အနခေထြားရာတှငျ လူအရှငျလတျလတျကို မွတှေငျးတူးမွှုပျနှံကာ အပျေါမှ တံခါးတိုငျစိုကျခွငျးကို “လူစတေး”ခွငျးဟု ဆိုလိုသညျ။ မွနျမာ့မှတျတမျးမှတျရာ မတှရှေိ့ရသျောလညျး ၁၉၂၅ခုနှဈ ဗွိတိသြှကိုလိုနီခတျေ ကြောကျစာဋ်ဌာန (ယခုရှေးဟောငျးသုတသေန) မှ ကြောကျစာဝနျ (ယခုရှေးဟောငျးသုတသေနညှနျကွားရေးမှုး) တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ ခြားဈဒူရှိုငျဆယျ (Charles Duroi-selle)က “မန်တလေးနနျးတျောလမျးညှနျ”(Guid to Mandalay Palace, Govt, Printing, 1925 ) စာအုပျမှာ ကြား မ ကွီးငယျ ၅၂ယောကျကို စတေး ခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲရေးသားခဲ့ပါသညျ။ ထိုစာအုပျကိုပငျ ၁၉၆၃ခုနှဈက လမျးညှနျကို ဖွုတျပွီး မန်တလေးနနျးတျော(Mandalay Palace) အမညျသဈဖွငျ့ တက်ကသိုလျပုံနှိပျတိုကျမှ တျောလှနျရေးအစိုးရ …
ဝကျလကျမွို့မဈေးကို မနကျတိုငျး ဈေးလာဝယျတဲ့ ဥစ်စာစောငျ့မလေး အကွောငျး
ဝကျလကျမွို့မဈေးကို မနကျတိုငျး ဈေးလာဝယျတဲ့ ဥစ်စာစောငျ့မလေး အကွောငျး အျောသံကွားလို့ ကွညျ့ လိုကျတာ အဖညေီ့မ ဒျေါလေး ဖွဈသူ ဒျေါလုံးယဉျ (ချေါ) ဒျေါစပျ ရဲ့ အျောသံ ဖွဈနပေါတယျ။ ဒျေါလေးအိမျကို သှားကွညျ့ လိုကျတော့ အိပျယာထဲမှာ သတိမပွေီ့း နပေါတယျ။ အိမျနီးပတျဝနျးကငျြမှ လူကွီးမြား လူငယျမြားလဲ ဝိုငျးအုံလာပွီး ယပျခပျသူ ယပျခပျ၊ နှိပျနှယျပေးသူ ပေးနှငျ့ ဝိုငျးအုံနပေါတယျ။ ဆရာဝနျသှားချေါဖို့နဲ့ ရှာဦး ဘုနျးတျောကွီး ပငျ့လြောကျဖို့ ပွောနကွေတာကိုလညျး ကွားနရေပါတယျ။ မကွာခငျ မွို့မှ ဆရာဝနျကွီးရောကျလာပွီး လိုအပျတာ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ ဒျေါလေး သတိရလာပါပွီ။ ဒျေါလေးက သူ့အဖွဈကို အခုလို ပွောပွပါတယျ။ ကမြ …
အလှုပ် တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်သော ကိုဖောင်တိန်သည်”သေဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား” ဟု နှုတ်ဆက်စကားပြောရင်း ရောက်ရှိ၍လာလေ၏။ ကိုဖောင်တိန်နှင့် မရှေးမနှောင်းဆိုသလိုပင် ဗေဒင်မေးမည့်မိန်းမကြီးတစ်ဦးသည်လည်း ရောက်ရှိ၍လာပြန် လေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ကိုဖောင်တိန်နှင့် စကားမပြောနိုင်သေးပဲ ထိုမိန်းမကြီးအား ဗေဒင်ဟောပေးရန်အတွက် ထိုမိန်းမကြီး၏ မွေးသက္ကရာဇ်ကို မေး၍ ဗလာစာအုပ်ပေါ်တွင် တွက်ချက်ခြင်းကို လုပ်နေရ လေ၏။ ထိုမိန်းမကြီးသည် ၎င်း၏အနီးတွင် ထိုင်နေသည့် ကိုဖောင်တိန်အား ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်လုပ်ကာ ထိုင်နေရသည်ကို မသတီသည့်ပုံဖြင့် ခုံကိုအနည်းငယ်နေရွှေ့၍ ထိုင်လိုက်လေ၏။ ဗေဒင်တွက်သည့်ကိစ္စ ပြီးသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် ထိုမိန်းမကြီးအား ဗေဒင်ဟောပြောလေ၏။ ဗေဒင်ဟောသည် ဆိုသော်လည်းပဲ ကျွန်ုပ်က ဗေဒင်ဟောရသည်ထက် ထိုမိန်းမကြီးက ၎င်းင်း၏အကြောင်းကို ၎င်းင်းကပင်ထိုင် ၍ပြောပြနေသည်ကို …
ယောကျာ်းတွေကိုစိတ်နာ ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေ ဆိုတဲ့ကျိန်စာ (သို့မဟုတ်) မိန်းမရဲ တောင်တော် သခင်မ သမိုင်းအကြောင်း
ယောကျာ်းတွေကိုစိတ်နာ ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေ ဆိုတဲ့ကျိန်စာ (သို့မဟုတ်) မိန်းမရဲ တောင်တော် သခင်မ သမိုင်းအကြောင်း မိန်းမရဲတောင်ရဲ့ အလှ အပကို စိတ်ဝင်စားလို့ သွားကြ ဘုရားဖူးကြ Facebookမှာ ပုံတွေ ခဏခဏတွေ့ နေရပေမယ့်.. အဲဒီတောင်ရဲ့သမိုင်းကို သေချာရေရာအောင် သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှား . ကျနော်စပ်စု စုံစမ်း မေးမြန်းထားသလောက်က ဒီလိုဗျို့…… နာမည်က နန်းဧကရီမွှေး ဘုရင့် သမီးတော် တစ်ပါးပေါ့ … အချစ်ဆိုတာက ဆန်းကျယ်တယ်လေ သူချစ်မိတာက ကျေးတောသား … ကုမ္မာရ တဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေတာကို ဘုရင့် ရွေနားတော် ပေါက်ကြား အမျက်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်လား …. …
သမီးပျိုတိုင်းကို ပန်းဦးဆက်ရတဲ့ ပုဂံခေတ်က အရည်းကြီးများ အကြောင်း
သမီးပျိုတိုင်းကို ပန်းဦးဆက်ရတဲ့ ပုဂံခေတ်က အရည်းကြီးများ အကြောင်း ပုဂံမြေသည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ထွန်းကား ပြန့်ပွားရာ နေရာဖြစ်သည့်အလျောက် ဘုရားပုထိုးပေါင်းများစွာ တည်ရှိသော အံ့ဖွယ်နေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသာသနာတော် တရှိန်ထိုး တိုးတက် ခဲ့သော ပုဂံသမိုင်း၌ လူအများစုအတွေးထဲတွင် အရည်းကြီးတို့၏ အခမ်းကဏ္ဍသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ် ပါဝင်လာသည်။ အရည်းကြီးနှင့်ပတ်သက်လျှင် အနော်ရထာမင်း မတိုင်ခင်ခေတ်နှင့် အနော်ရထာမင်းနောက်ပိုင်း ပုဂံ ခေတ်မှ စတင် ရေးသားရပါမည်။ အနော်ရထာမင်း မတိုင်မှီသည် ပျူ စာပေ၊ မွန်စာပေ၊ ပါဠိဘာသာတို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာစာပေ မပေါ်ပေါက်သေးဟု လက်ခံကြသော ခေတ်ဖြစ်ကာ အနော်ရထာမင်း နောက်ပိုင်းသည် မြန်မာစာပေ စတင်ထွန်းကားလာသောခေတ်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အရည်းကြီး …
သုသာန်စောင့်မဖဲဝါ ( ၁ )
သုသာန်စောင့်မဖဲဝါ ( ၁ ) သာယာကုန်းရွာသစ်နေ ဘကြီးဦးစံဝ၏ပြောပြချက် “အဘတို့ငယ်ငယ်က လူကြီးသူမတွေက ဆုံးမ ထားခဲ့တယ်၊ လပြည့်နေ့ညမျိုးမှာ ခွေးဟောင်နေ ရင် လှမ်းမငေါက်ရဘူးတဲ့” “ခွေးကို မငေါက်ရတာလား” “ဟုတ်တယ်၊ တစ်ခါတလေ ညကြီးမင်းကြီး အိမ်ပြင်ဘက်မှာ ခွေးတွေ စူးစူးရွားရွား ထိုးဟောင် နေတာမျိုး ရှိတတ်တယ်လေ၊ မှောင်ကြီးမည်းကြီး ထဲကို ကြည့်ပြီး သည်းသည်းမည်းမည်း ဟောင်နေတာ” “ဟုတ်တယ်…ဟုတ်တယ်၊ တစ်ခါတလေများ ကိုယ်က အိပ်မောကျစ အချိန်မျိုးဆိုရင် ရင်တုန် ပန်းတုန်နဲ့ လန့်နိုးပြီး သိပ်ဒေါသဖြစ်စရာ ကောင်း တာပဲလေ” “ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ လပြည့်ညမျိုးဆိုရင်တော့ ဟောင်နေတဲ့ခွေးကို လှမ်းမငေါက်ရဘူး၊ မဟန့် ရဘူး” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “အဲဒီလို …
အိုမင်းသွားသော အာဇာနည်မြင်း (ပညာပေးပုံပြင်) ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက တစ်နေ့ကို မိုင်တစ်ထောင် သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းပျိုလေး တစ်ကောင် ရှိတယ်၊ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသဖို့ အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတယ်…. ကုန်သည် လာပြောတယ်၊ ` မင်းငါနဲ့လိုက်နိုင်မလား´ မြင်းက ခေါင်းခါပြီး ပြောတယ်၊`ငါက တစ်နေ့ မိုင်တစ်ထောင် သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းကွ… ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကုန်သည်နောက်လိုက်ပြီး ကုန်ထမ်းရမှာလဲ ? ´….. စစ်သားလာတယ်၊ ပြောတယ်၊ ` မင်းငါနဲ့လိုက်နိုင်မလား´မြင်းက ခေါင်းခါတယ်၊ (ငါက တစ်နေ့မိုင်တစ်ထောင်သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းကွ… ဘယ်လိုဖြစ်လို သာမာန်စစ်သားတစ်ယောက်နောက်လိုက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရမှာလဲကွ? ´….. မုဆိုးလာတယ်၊ ပြောတယ်၊ ` မင်းငါနဲ့လိုက်နိုင်မလား´မြင်းက ခေါင်းခါတယ်၊ `ငါက တစ်နေ့မိုင်တစ်ထောင်သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းကွ… …
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားလိုစိတ် (Paedophilia) အကြောင်း By ဟယ်လ်သင် Paedophilia ဆိုတာကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတခုဖြစ်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းကလေး၊ ယောကျာ်းလေးမှန်သမျှကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်လိုစိတ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်လိုစိတ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုချင်စိတ် ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ရောဂါတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတဦးက အရွယ် မရောက်သေးတဲ့ လူမမယ် ကလေးငယ်တွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်မက်မှုဖြစ်တဲ့ စိတ်မူမမှန်ရောဂါ တမျိုးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီစိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေဟာ အပျို၊ လူပျိုဖော် မဝင်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုချင်တဲ့ သဘာဝ ရှိကြပြီး အထူးသဖြင့် ၁၀ နှစ်အောက် …